နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ အကြံပြုတင်ပြချက် (၄) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ အကြံပြုတင်ပြချက် (၄)
နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ အကြံပြုတင်ပြချက် (၄)
Posted by asiamasters on Mar 19, 2013 in Ideas & Plans |4comments
ဒီစာကို ရေးခြင်းဟာ ဒီနေ့ နိုင်ငံတော်ကို ခေါင်းဆောင်နေသူများအနေနဲ့ သတိထားမိအောင်ရေးထားတာပါ။ ဒီနေ့ ဒီအချိန်က ခေတ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းကာလဖြစ်ပြီး မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးအခွင့်အခါကောင်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါပြန်မရနိုင်တော့မဲ့ ဒီအခွင့်အခါကောင်းကို အကောင်းဆုံးအသုံးချပြီး ဆင်းရဲ၊စုတ်ပြတ်ပြီး နိမ့်ပါးတဲ့ အလုပ်တွေကို ပဲလုပ်နေရတဲ့လူမျိုး၊ နိုင်ငံတကာလူ့အဆင့်အတန်းမှာပင်မရှိတော့ပဲ၊ သူတစ်ပါးလှုဒါန်းမှ အလုပ်လုပ်နိုင်တော့လူမျိုးတစ်မျိုး၊ ကိုယ့်အကြွေးကိုယ်မဆပ်နိုင်တော့လို့ သူတစ်ပါးကလျှော်ပေးမှ အကြွေးကင်းနိုင်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်မှ လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြရတော့မယ်။ ဒီနေ့အခြေအနေမှာတော့ နိုင်ငံတကာက ပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ ရုပ်သိမ်းပြီ။ အကူအညီတွေအများကြီးရပြီ။ ဒါပေမဲ့ဒီအကူအညီတွေဟာ မူဝါဒနဲ့လမ်းစဉ်မရှိရင် ဘယ်လိုမှ အကောင်အထည်မဖေါ်နိုင်ပါဘူး။
မြန်မာလူမျိုးတွေလိုနေတာက အကူအညီတွေထက်စာရင် နက်ရှိုင်းတဲ့ နားလည်သဘောပေါက်မှုတွေလိုနေတာပါ။ အပေါ်ယံနဲ့ အလကားလိုချင်စိတ်တွေကို ဖျောက်ပစ်မှရမှာပါ။ အရေးကြီးတာက လွှတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဥပဒေပြုတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များအလိုက် ရေးသားကြတဲ့နေရာမှာ မြန်မာစာပေ ကို အသုံးပြုတာထက် အင်္ဂလိပ်စာပေကို အသုံးပြုမှသာလျှင် အဆင်ပြေပါမယ်။ မြန်မာစာပေကို ပဲအသုံးပြုလိုတယ်ဆိုရင် အချိန်နဲ့ငွေတွေရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး ပြန်လည် ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆည်းရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကို မြန်မာဘာသာသို့တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုမှုများဟာ မပြည့်မစုံဖြစ်ပြီး၊ နားလည်သဘောပေါက်မှုများမျာ ကျဉ်းမြောင်းကုန်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် အောက်မှာဖေါ်ပြထားတာကတော့ Operation Hierarchy တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Operation ကို မြန်မာဘာသာမှာ သူ့ Context အလိုက် လုပ်ငန်းလို့ ဘာသာပြန်ပါတယ်။ Task ဆိုတာကို လုပ်ငန်းတာဝန်၊ အလုပ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။ Duty ဆိုတာက အလုပ်တာဝန်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီအလုပ်တွေဟာ ဘယ်လိုကွာသလဲဆိုရင်တော့ အဓိပါယ်ဖွင့်ထားတာမရှိတော့ပါဘူး။ ရောင်ဝါးဝါးတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ ဒီတော့ လူသားတွေကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးက လမ်းချော်ကုန်တယ်။ လူသားတွေကို တစ်ခုခုသင်ကြားပေးလိုတယ်ဆိုရင် သူ့ကို လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Skills & Knowledge ကို အရင်သင်ပေးရတယ်။ Skills ဆိုတာ ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ Knowledge ဆိုတာက သူသိရမဲ့ အရာမှန်သမျှကို သိအောင်သင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ Skills & Knowledge တွေကို အုပ်စုဖွဲ့လိုက်ရင် Task လို့ခေါ်တယ်။ Task တွေကိုအုပ်စုဖွဲ့လိုက်ရင် Duty လို့ခေါ်တယ်။ ဒီ Duty တွေကို အုပ်စုဖွဲ့လိုက်ရင် Method လို့ခေါ်တယ်။ ဒီ Method တွေကို အုပ်စုဖွဲ့လိုက်ရင် Operation လို့ခေါ်တယ်။ ဒီလို Operation တွေကို အုပ်စုဖွဲ့လိုက်လျှင် Sector လို့ခေါ်ပါတယ်။ လူသားတွေကို သင်ကြားပေးရာမှာ Skills & Knowledge ကနေစပြီးနောက်ဆုံး Sector တွေအထိသွားလို့ရတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာလူမျိုးများ ရှေ့ဆက်ခရီးမှာ အချင်းချင်းငြင်းခုန်နေပြီး၊ ဥက္ကဌရှုးများ၊ ရာထူးရူးများ၊ ဌာနစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ ၀န်ကြီးဌာနအစွဲအစရှိသည်တို့ကို ဖျောက်ပစ်ပြီး မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးအတွက် ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင် လုပ်ရန်လိုသည်။ လုပ်ရန်မှာလည်း နှစ်မျိုးသာရှိသည်။ ပထမတစ်နည်းမှာ တစ်ချို့နေရာများတွင် အင်္ဂလိပ်စာလုံးများကို တိုက်ရိုက်သွင်းရမည်။ ဒုတိယတစ်နည်းမှာ မြန်မာစာပေကို နိုင်ငံတကာ Politics, Economics, Education, Social အစရှိသည်ဖြင့်ဘာသာရပ်များနှင့် ကိုက်ညီဘာသာပြန်နိုင်အောင် ငွေကြေးအင်အား၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များကို အသုံးပြု၍ အလျှင်အမြန်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
ဝေါဟာရတွေကို မြန်မာပြန်ရာမှာ ဆရာ မောင်စူးစမ်းပြန်တာလေးတွေ သိပ်လှပါတယ်။
ဒါတောင်မှ နားထဲမစွဲ သဘောပေါက်မလွယ်တာတွေ အများကြီးပါ.
ပိုကောင်းတဲ့ ဝေါဟာရ မဖလှယ်နိုင်သေးရင် မူရင်းဘာသာကိုပဲ သုံးတာ အကောင်းဆုံးပါ။
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ၂၀၁၃ ဖေဖေါ်ဝါရီ – kai
မြန်မာတို့ စကားမကြွယ်၊ စာဖွယ်လှပါသည်ဟုပင် ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်နာနာကြိတ်ကာ အသံနှိမ့်လျှက် ဆိုရပါလိမ့်မည်။
ရဟန်းပညာရှိ၊လူက၀ိတို့က မြန်မာစာပေနိဒါန်းသစ်ကို မွေးစားယူငင်သုံးစွဲဖန်တီးသင့်လှသည့် ခေတ်အချိန်အခါသို့ရောက်နေပါပြီဖြစ်ပါကြောင်း..။…
ကြည့်ရတာ.. ဒီခေတ်မှာ.. အင်္ဂလိပ်စာကို မြန်မာအက္ခရာနဲ့တန်းရေးတာပဲ အသင့်လျှော်ဆုံးဖြစ်မယ့်ပုံပဲ..။
ဂျပန်မှာဆို.. ခတခနပေါ့..။ မြန်မာမှာ.. ဘားဂလစ်ရှ်..။
Katakana (片仮名, カタカナ or かたかな) isaJapanese syllabary, one component of the Japanese writing system along with hiragana, kanji, and in some cases …
လက်ရှိမျိုးဆက်တစ်ဆက်စာ နှစ် ၂၀ လောက်အတွက် တော့ အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရတွေကို တတ်နိုင်သမျှ တိုက်ရိုက်သုံးပြီး အချို့ ဝေါဟာရတွေကို ဆီလျှော်တဲ့ မြန်မာစာလုံးနဲ့ ဘာသာပြန်သတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။
အဲဒီလို ဘာသာပြန်ဖို့ကိုလဲ မြန်မြန်နဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် အဖွဲ့ဖွဲ့ထားပြီးတော့ လုပ်သင့်တယ်။
နောက်မျိုးဆက်တစ်ဆက်စာ ၂၀၃၀ ကျော်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို
ပညာရပ်သုံးနဲ့ ရုံးသုံးအဖြစ် သုံးနိုင်အောင်လုပ်သင့်တယ်။
ကျုပ်တို့ လူတောမတိုးရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ကတော့
မြန်မာစာကို ပညာရပ်သုံးနဲ့ ရုံးသုံးအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်လို့ပဲ….။
ဂဠုံဦးစော ဆိုရင် ကိုးတန်းပဲအောင်တဲ့ တောရှေ့နေ(အထက်တန်းရှေ့နေ)လေး….
အင်္ဂလိပ်စာပေကို ဘာသာပြန်ရာမှာ အလွန်လက်ရာကောင်းတဲ့
အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ၀တ္ထုတောင်ရေးသွားတဲ့ ရွှေဥဒေါင်းဆိုရင်